१ कोरिन्थी ९ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ताजिकी तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
अनलाइन बाइबल | पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद
१ कोरिन्थी ९:१-२७
९ के म स्वतन्त्र छैन? के म प्रेषित होइन? के मैले हाम्रा प्रभु येशूलाई देखेको छैन? के तिमीहरू प्रभुमा मेरो काम होइनौ र? २ म अरूका लागि प्रेषित नभए तापनि तिमीहरूका लागि त पक्कै हुँ, किनकि प्रभुमा मैले पाएको प्रेषितको जिम्मेवारीको पुष्टि गर्ने छाप तिमीहरू नै हौ। ३ मेरो जाँचपड्ताल गर्नेहरूलाई म यस्तो सफाइ दिन्छु: ४ के हामीसित खाने र पिउने अधिकार छैन र? ५ के हामीसित बाँकी प्रेषितहरू र प्रभुका भाइहरू अनि केफासले जस्तै ख्रीष्टियन बहिनीलाई विवाह गरेर आफूसँगै यात्रामा लैजाने अधिकार छैन र? ६ वा के गुजारा चलाउन काम नगरी बस्ने अधिकार बर्णाबास र मसित मात्र छैन र? ७ त्यस्तो को छ, जसले आफ्नै खर्च बेहोरेर सिपाहीको रूपमा सेवा गर्छ? त्यस्तो को छ, जसले दाखबारी लगाएर त्यसको फल खाँदैन? वा त्यस्तो को छ, जसले बगालको हेरचाह गर्छ तर त्यसको दूध भने पिउँदैन? ८ के म यी कुराहरू मानिसहरूको स्तरअनुसार भन्दैछु? वा के मोशाको व्यवस्थाले पनि यी कुराहरू बताउँदैन र? ९ किनकि मोशाको नियममा यस्तो लेखिएको छ: “दाइँ गरिरहेको गोरुलाई मोहलो नलगाउनू।” के परमेश्वरले गोरुहरूको फिक्री गर्नुभएको हो? १० वा हाम्रै खातिर उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो? वास्तवमा हाम्रै लागि यो लेखिएको थियो किनभने हलो जोत्ने मानिसले केही अनाज पाउने आशामा हलो जोत्नुपर्छ अनि दाइँ गर्ने मानिसले केही अनाज पाउने आशामा दाइँ गर्नुपर्छ। ११ यदि हामीले तिमीहरूका लागि परमेश्वरका कुराहरू छरेका छौं भने के तिमीहरूबाट भौतिक कुराहरूको कटनी गर्नु गलत हुनेछ? १२ यदि अरू मानिसहरूले तिमीहरूमाथि यस्तो हक जमाउँछन्‌ भने के हाम्रो झन्‌ बढी हक लाग्दैन र? तैपनि हामीले यस्तो हक जमाएका छैनौं, बरु ख्रीष्टको विषयमा सुसमाचार फैलाउन कुनै बाधा नपुगोस् भनेर सबै कुरा सहिरहेका छौं। १३ मन्दिरमा पवित्र सेवा चढाउनेहरूले मन्दिरकै कुराहरू खान्छन्‌ अनि वेदीमा निरन्तर सेवा गरिरहनेहरूले वेदीमै चढाइएका कुराहरूको भाग पाउँछन्‌ भनेर के तिमीहरूलाई थाह छैन? १४ यसरी, सुसमाचार घोषणा गर्नेहरूलाई पनि सुसमाचारद्वारै जीविका चलाउन प्रभुले निर्देशन दिनुभएको छ। १५ तर मैले यी प्रबन्धहरूमध्ये एउटैको पनि उपभोग गरेको छैन। निस्सन्देह, मेरो लागि पनि यस्तै प्रबन्ध गरियोस् भनेर मैले यी कुराहरू लेखेको होइन, किनकि त्यो भन्दा त म मर्नु नै बेस—अहँ, मेरो घमन्ड गर्ने आधार म कसैलाई खोस्न दिन्नँ! १६ यदि म अहिले सुसमाचार घोषणा गर्दैछु भने त्यो मेरो लागि घमन्ड गर्ने कुनै कारण होइन, किनकि यो त मेरो दायित्व नै हो। बरु मैले सुसमाचार सुनाइनँ भने मलाई धिक्कार छ! १७ यदि मैले यो काम राजीखुसीले गरें भने मलाई इनाम छ। तर यदि मैले आफ्नो इच्छाविपरीत यो काम गरें भने पनि त्यो मलाई सुम्पिइएको जिम्मेवारी नै हो। १८ त्यसोभए, मेरो इनाम के हो? यही कि, सुसमाचार सुनाउँदा मैले शुल्क नलिई सुनाउन सकूँ अनि सुसमाचार सुनाउने सन्दर्भमा आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरूँ। १९ हुन त, म सबै मानिसहरूबाट स्वतन्त्र छु, तर धेरै जनालाई हासिल गर्न सकूँ भनेर मैले आफूलाई सबैको दास बनाएको छु। २० त्यसैले यहूदीहरूलाई हासिल गर्न सकूँ भनेर म यहूदीहरूका लागि यहूदीजस्तै भएँ। अनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूलाई हासिल गर्न सकूँ भनेर म व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएजस्तै भएँ। २१ परमेश्वरसामु म व्यवस्था नभएको मानिस होइन, किनकि म ख्रीष्टसामु व्यवस्थाकै अधीनमा छु तैपनि व्यवस्था नभएकाहरूलाई हासिल गरूँ भनेर व्यवस्था नभएकाहरूको लागि म व्यवस्था नभएजस्तै भएँ। २२ कमजोरलाई हासिल गरूँ भनेर कमजोरका लागि म कमजोरै भएँ। कसै-कसैलाई हर हालतमा बचाउन सकूँ भनेर सबै किसिमका मानिसहरूका लागि म सबै कुरा भएको छु। २३ अरूलाई सुसमाचार बाँड्न सकूँ भनेर यसको खातिर म सब थोक गर्छु। २४ दौडमा भाग लिने सबै धावकहरू दौडन्छन्‌ तर पुरस्कार भने एक जनाले मात्र पाउँछ भनेर के तिमीहरूलाई थाह छैन? यसैले तिमीहरू पुरस्कार पाउन सक्ने गरी दौड। २५ यसबाहेक, प्रतियोगितामा भाग लिने हरेक मानिसले सबै कुरामा आत्मसंयम गर्छ। विनाशी मुकुट पाउनलाई तिनीहरू त्यसो गर्छन्‌ तर हामीचाहिं अविनाशी मुकुट पाउनलाई। २६ त्यसैले म अन्धाधुन्ध दौडिन्नँ अनि जथाभावी हावामा मुक्का हान्दिनँ। २७ तर म आफ्नो शरीरलाई कुट्छु अनि पिट्छु र त्यसलाई दास बनाएर राख्छु, ताकि अरूलाई प्रचार गरिसकेपछि म आफैचाहिं कसै गरी अयोग्य नठहरिऊँ।
१ कोरिन्थी ९